Okuhlanzekile futhi Okuphekiwe Ukunambitha Osteria - Messina
Okujwayelekile Messina cuisine
Okusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria e Via Liguria ang. Nge-Siracusa a Messina uyaqaphela Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe ukulandela isiko elijwayelekile leMessina. Insiza yokuthatha uyatholakala futhi kungenzeka uku-oda online.
Okuphekiwe nokunambitheka i-Osteria eMessina - Imenyu ecebile
Konke i Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe dell 'Okusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria zenziwa nsuku zonke ngentshiseko enkulu nokuhlonipha izithako, ezihambisana nokho ngezikhathi ezithile ngezinto ezintsha kumenyu, ezenzaOkusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria di Messina ilungele zonke izinhlobo zamakhasimende nganoma yisiphi isikhathi sosuku. THE Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe baqinisile futhi bayanambitha, ukuhlinzeka zonke izivakashi isipiliyoni esihle kakhulu sosizi esibabandakanya ku-360 °. Inyama nososeji okusetshenziselwa amalungiselelo atholakala ngokweqiniso kakhulu emakethe, ukutholakala kwawo kungukugcinwa kwe I-Butcher Delicatessen Panarello eMessina umnikazi ofanayo ohlanganisa amaqiniso amabili ahambisanayo ngaleyo ndlela.
Okuhlanza futhi okuphekiwe Ukunambitha i-Osteria eMessina - Futhi kuthathwe
TheOkusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria e Via Liguria ang. Nge-Siracusa a Messina inikeza izinto ezinhle zokudla kwaseSicily ukuthola ukuthi ufuna nini ukunambitheka Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe. Phakathi kwezinye izintoOkusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria eMessina futhi inikeza abathengi insizakalo yokususa evumayo, ilungele labo abafuna ukuphumula noma abanaso isikhathi sokupheka futhi abafuna ukuyijabulela Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe kahle ekhaya.
Okuhlanza futhi okuphekiwe Ukunambitha i-Osteria eMessina - Ama-oda online
TheOkusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria ihambisana nezikhathi zokuqinisekisa amakhasimende insiza enhle kakhulu mayelana Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe. Uku-oda ku-inthanethi akukaze kube lula ukubonga kusetyenziso olusebenzayo lweOkusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria: akunasikhathi ungazikhethela owakho Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe futhi uwaqoqe ukuze athathe. Ukukhethwa ngokucophelela kwezithako zokuzikhethela zokuqala kungubucwebe obumqhele Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe dell 'Okusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria.
Okuhlanza futhi okuphekiwe Ukunambitha i-Osteria eMessina - Prestige nokunambitha enkonzweni yakho
TheOkusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria e Via Liguria ang. Nge-Siracusa a Messina ilinde ukuthi ikuvumele ukuthi uzame ubuqiniso bayo, nokunambitha nesipiliyoni sabo kanye nesiko elinalo Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe. Isiko nokuqamba kuhlangana ku Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe dell 'Okusobala nokuphekwe Ukunambitha i-Osteria ukudala amamenyu amasha njalo, amnandi futhi ngaphezu kwakho konke egameni lokulula nobuqiniso. Zama i Ukulungiselela inyama eluhlaza futhi ephekiwe dell 'Okuhlanza futhi Okuphekiwe Ukunambitha i-Osteria a Palermo.
Ikheli: Via Liguria ekhoneni noVia Siracusa
Ucingo: 090 2938162
Umakhala ekhukhwini: 348 9874110
Inombolo ye-VAT: 01959560838